Ukuthokomala Esikhungweni Somlando - I-Airbnb
Ukuthokomala Esikhungweni Somlando
Ouro Preto , Minas Gerais, i-Brazil
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Maria Luiza
U-Maria Luiza Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 19.
Yamukela ubulula, indawo enokuthula nenomlando omuhle.
Ifulethi endaweni ethokomele kakhulu futhi enomqondo ovulekile, nengaphakathi elilungiswe kahle futhi lalungiswa maphakathi nesikhungo somlando. Isikhala sisebenze ngokuzikhandla okukhulu ukuze sikwazi ukuwathola ngendlela engcono kakhulu.
I-trenzin ekhethekile ukuze ukwazi ukuphumula ngemva kosuku lokubuka indawo noma kalula futhi uphumule ngempelasonto, nesimo sezulu esihle sentaba.
Ubhasikidi wesidlo sasekuseni wansuku zonke zobusuku.
Sitholakala enkabeni engokomlando yedolobha, endaweni egcwele isiko nomlando wabantu bethu, ungathola enye yezindawo ezinhle kakhulu zokuvakashela idolobha, futhi, uma uthanda, ungahamba ngezinyawo ukuya kuzo zonke izindawo.
I-trenzin enkulu futhi elungisiwe, enomoya oshisayo, ekhanyayo futhi enakho konke okudingekayo. Isitayela sayo se-Baroque, esinefasitela elenziwe ngezandla, lapho ungaba nekhofi kusihlwa ujabulela ukubuka indawo, ngisho nasezinsukwini ezipholile, ukuze ujabulele leyo ndawo encane enomuzwa ovamile wedolobha.
Ifulethi elivulekile elingu-40kele, elinekamelo lokulala, ikhishi negumbi lokuphumula endaweni efanayo yesitayela se-loft. Sinekhishi elinazo zonke izinto ezidingekayo, indawo enetafula nezihlalo, engasebenza njengokwesekwa komsebenzi, indawo yokungena, indawo yokugcina izikhwama, i-macaw ukuze ukwazi ukuhlela izinto zakho, kanye nombhede ontofontofo obheke ku-TV okwazi ukungena ku-Netflix. Igumbi lokugezela elihlukile lineshawa emnandi kakhulu, kanye nosinki onetafula le-granite njengosizo.
ubusuku obungu-7 e- Ouro Preto
Aug 18, 2022 - Aug 25, 2022
Indawo eyakhelene ne-António Dias e-Ouro Preto igcinwe kahle kakhulu, ibiyingxenye yomlando kusukela ekuqaleni kwedolobha. Kuwukugxila kwangempela kwekhulu le-18.
Indawo ezungeze amadolobha amakhulu egcwele izindaba, amabhuloho, iziphethu, izindlu zasedolobheni, izimayini, amasonto, nama-villa ezindawo eziphawulekayo emlandweni wethu. Kuyo itholakala e-Matriz Nossa Senhora da Conceição, indlu ka-Aleijadinho, lapho ayehlala khona njengengane nomndeni wakhe, i-Chico Rei, i-Sighs Bridge enezindaba zase-Marilia de Dirceu, nemigwaqo eyayiyingxenye yomzila wegolide.
Ibungazwe ngu-Maria Luiza
UMaria Luiza Ungumbungazi ovelele
Izilimi: English, Français, Português
Hlola ezinye izinketho ezise- Ouro Preto namaphethelo
Ouro Preto Region